जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! (भिडियो सहित)
बारीपारी घना जंगल, ३ नदीको संगमअनिबिचमा मनै लोभ्याउने मन्दिर । यो दृश्य हो गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ आँपचौरमा रहेको कोटेश्वर महादेव मन्दिरको । उक्त मन्दिरमा पुग्दा मनै आनन्द हुन्छ । तर उचित प्रचारप्रसार हुन नसक्दा आझेलमा परेको छ । २०५१ सालमा डिल्लीराज सापकोटाले पत्ता लगाएको एउटा सानो गुफामा त्ततिसकोटी देवताको आकार लगायत बिभिन्न प्रकारका आकृतिहरु देख्न सकिन्छ ।
बिस्तारै त्यसको बिकास हुदै भौतिक संरचनाहरु निमार्ण भए । तर जति उक्त मन्दिरको महिमा छ सोही अनुरुप बिकास हुन भने सकेन । अहिले पनि सो मन्दिरमा गुल्मी, अर्घाखाँची,बाग्लुङ, पाल्पा, प्युठान, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायत नेपालका धेरै जिल्लाहरुबाट श्रद्धालुभक्तजनहरु पुजापाठको लागी त्यहाँपुग्ने गर्दछन । त्यस मन्दिरमा जे बर मागे पनि पुग्छ भन्ने जनबिश्वास रहिआएको छ । तपाई पनि सक्नुहुन्छ भने एकपटक सो मन्दिरमा दर्शनको लागी आउनु होला । यदि नसके पनि यो भिडियोलाई हेरी एक एक सेयर सबैले गर्नुहोला ।
हेरौ सोही मन्दिरको भिडियो ।
एक बृद्धाको १ लाख चोरेर भारतीय यी महिलाले आफ्नै गोप्य अंगमा लुकाएपछि…